musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yekambani yebhola yakanakisisa inozivikanwa neNickname; "2nd Prince of Monaco". Yedu Kylian Mbappe Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inokupa zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange;
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Kylian Mbappé Lottin akaberekerwa muBondy, kuchamhembe-kumabvazuva kweParis muna 20th December 1998 nababa vake vaMamerbia, VaWilfried Mbappe (mudzidzisi) uye amai veAgeria, Fayza Mbappe Lamari (mutambo wechikwata chekare). Kuberekwa kwake kwakasvika mwedzi mitanhatu pashure pokunge France yakakunda 1998 World Cup kuStade de France iyo yaiva 11km kubva kumusha kwake. Sezvo mwana akasiyana-siyana mumakwikwi akaberekerwa mumhuri yemitambo, chimwe chinhu chaiva chokwadi kune mukomana muduku "Bhora."
Maererano nababa vake,
"Mwanakomana wangu Kylian anopfuura kudada pamusoro pebhola- Ndinofunga kuti akangwara. Anoda kuti andisundire kunyange iwe ini ndozviona somudzidzisi webhola. Anogara ari mariri 24 / 7. Kylian anoona zvose. Anogona kutarisa mitsara mina kana mashanu mumutsara. "
Kukura mumasango eParis uyo akamborwiswa nechisimba uye kupopota hazvina kumudzivisa. Zvese nezveramangwana rake rakanyatsochengetedzwa nemhuri yake.
Kukwanisa kwake kuisa nguva yakatarisa kwakaratidza kubudirira kwake mubhoza. Haana kumbopedza nguva yake kutonga. Akati kwete kuzvinhu zvisingakoshi sezvinoenda kuchikoro panguva dzakakwana kuitira kuti uwane nguva yebhola. Hungu, nguva yake nemhuri uye shamwari dzepedyo zvakanga zvakakosha, asi mushure mezvo zvakauya mutambo uye hapana chimwe chinhu.
Akadzidza kuve kuruboshwe mberi uye kuti ungava sei nekukurumidza. Kudzidza kubhururuka kwakanga kusiri kunze. Izvi ndizvo zvaakaita mutambo wake.
Pazera re6, akaonekwa seimwe nguva yeFrance yakanakisisa mwana wemutambo. Iyi ndiyo nguva yaakazozivikanwa neFrench Football Federation. Kylian akazadzisa zvinhu zvikuru semwana. Kwenguva dzakawanda akasiya shamwari dzake mune godo uye kushamiswa.
Kunyange semwana, Mbappe akatakura simba rekubudirira. Akanga akachengetwa nechipo chake chairo uye tarenda. Hapana munhu ari mumufananidzo uri pamusoro apa wakazviita kumusoro sezvaakaita. Vamwe vavo vakarasa nzira yavo munzira.
Iva nemafungiro akafanirwa kubudirira kwake kusvika pane imwe chokwadi. Yaiva mafungiro ake uye kutenda kwake pachake kwakamutakura kusvika kune zvaaida.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
BABA: Baba vake, Wilfried Mbappe ndivo vanobva kuCameroon neNigeria uye vanoshanda semudzidzisi pa AS Bondy (Sezvenguva yekunyora). Aimbova utiziro uyo akatamira kuFrance kuti awane mafuro. VaWilfried, vachida kuwana kugara nekugara vakaroora kune imwe nyika yeAgeria-French, Fayza.
Akatanga kurovedza mwanakomana wake Kylian pazera remakore matanhatu shure mumazuva apo vose vaviri vaiva vaduku zvikuru.
Ari iye zvino mutambi wenhabvu kumwanakomana wake. Anopedza mudzidzisi kune mukoma wechidiki anonzi Adeyemi Mbappé.
AMAI: Baba vaMbappe havasi ivo voga vakapfuura pamitambo yavo yekutamba uye mazamu. Amai vake Fayza Mbappe vakaberekwa Fayza Lamari ndeyeAgeria. Akanga ari mutambo wepamberi webasa.
Fayza Mbappe ndiyo inozvikudza yemuviri weFrench prodigy muchengeti, Kylian Mbappe. Kuva mutambo wekare, Fayza Mbappe anoziva chete ngani Ita basa rinotora kuti riite the profession munda. Uyu waimbova mutambo webamba akagamuchira mwanakomana Kylian musi waDecember 20, 1998, kuchamhembe-kumabvazuva kweParis. Akamutarisa kuti akure kuva akanaka chaizvo murume uye kunyanya kukosha mumwe wevadzidzi vanokosha munyika. Iye zvino anogara muBondy, France.
Kylian Mbappe ishanzvadzi yehafu Jires Kembo-Ekoko uyo anobva kuCongo akanaka. Baba vake vaimbova muteereri, shamwari yepedyo yaMnu Wilfried Mbappe uyo ainzi Zaire muZimbabwe Cup Cup.
Jire akatamira kuFrance paaiva mwana kuti agare naMnu Wilfried Mbappe uyo akazova mutariri wake wemutemo.
Iye ane makore 10 akakura kupinda wechidiki Kylian uyo pazera rake ari kupisa mugwagwa webhokisi yenyika. Vaviri vanoratidzirana sehama uye Jire yaiva chifananidzo chekutanga cheKylian. Akamboita bhora rake rebasa kuRennes.
Little Brother: Kylian Mbappe ane hama shomanana anonzi Ethan uyo ane makore 7 muduku. Vose mapato vanozviona ivo sechipo chikuru kuna vabereki vavo chavanofanira kuvapa. Kylian Mbappe akambova nechibvumirano naMonaco kuti abvumira hama yake kuva mascot yake. Izvi zvakaitika mushure mokunge avimbiswa naEtani kuti amuunze iye se mascot muChampions League.
Mbappe akati: "Aida izvozvo. Yaiva nguva huru. Akanga achiputsa musoro wangu kumba. Akati "Nditore, nditore", saka ndakati "Zvakanaka, ndichakutora, uya oonn ..."
Zvinonakidza kuziva kuti Ethan Mbappe ndicho chikonzero uye chinyorwa chekufemerwa kuti nei Kylian achipemberera zvinangwa zvake nekuisa maoko ake akayambuka uye achigunzva. Kylian Mbappe anobvuma kuti ndizvo izvo Ethan anoita paanomurova paFIFA's Playstation.
Maererano naKylian, 'Handizi ini wakauya nawo. Yaiva hama yangu, Ethan. Akapemberera saizvozvi nguva dzose paanondinyadzisa pane Playstation FIFA '
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mhepo yake yepamusoro inokurumbira mukurumbira, mubvunzo wevanhu vose rwandu ndeye ... Ndiani Kylie Mbappe's girlfriend?
Pasina mubvunzo, iye akaita kuti ave apule kune maziso emai vakawanda. Ari muhukama hwaanosarudza kuva pakavanzika. Pamagumo emamwe mashizha, Mbappe dzimwe nguva inokonzera kuchema kwevamwe vasikana. Kunyanya munhandare yemotokari, vasikana vakawanda vanomirira nzvimbo yavo.
Maererano naamai vake "Kurarama muParis zvingange zvisingabviri nekuda kwekushungurudzwa kubva kuvasikana. MuMonaco, iye akachengeteka ".
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Same Chikoro neFrench yechiFrench
MBappé akaenda kuClairefontaine. Iri ihurumende nhabvu centre uye academy iyo inonyanya kukosha mukurovedza French football players. Akapedza chikoro ichi muchikoro che2011. Anobatanidza rugwaro rwekuremekedzwa kwevakakwanisa kudzidza avo vanosanganisira Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa naWilliam Gallas.
Young Mbappé aive akakurumbira zvikuru paClairefontaine. Paakabvunzwa nezvechinangwa chake, akataura pamusoro pe Real Madrid ndokuti: "Zviri nani kutsvaga Mwedzi. Nenzira iyo, kana iwe ukakundikana, unosvika kumakore. "
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Mushure mokunge baba vake vakagumburwa, izvo zvakaguma nemanyevero anotyisa kuti vaizotarisa kuendeswa muwindo reJanuary kana zvinhu zvisina kuchinja, mutariri weMonaco, Leonardo Jadim akasarudza kumutanga kuMontpellier. Mbappe yakanga yakabatanidzwa zvikuru mumugwagwa we 6-2 weMontpellier uye haana kutarisa shure.
He akawana chikwata chake chekutanga chekudzidzira chikwata chaDecember 7-0 League Cup pamusoro peRennes, wechipiri munaFebruary 5-0 kusangana kweMetz uye akapemberera yekutanga yeLatin League kutanga nekuveza mukati memwoyo weManchester City kudzivirira chinangwa chake chekutanga mumakwikwi oisa rutivi rwake 2-1 kumusoro.
Izvi zvakaitika apo Mbappé akashandisa sevechiri kuyaruka munguva pfupi akakurumidza kutora zvakanyanya zvenhau.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Kuvhara Pasi Zvinopiwa
Pazera re15, apo vadzidzi vanobva kuClairefontaine mushure memakore maviri kuti vapinde mumakwikwi emakwikwi, Mbappé akaparadza mamwe ose Ligue 1, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool naBernern Munich kuti vabatane naMonaco uye vakatamira kune hutungamiri ramba uchidzidza.
AKunyange zvakadaro, kunyange Wilfried Mbappé aida chaizvo mwanakomana wake kugara naMonaco kuti apiwe kuti achapiwa nguva yakakwana yekutamba nguva, muna Gumiguru, mwedzi miviri mushure mokunge Monaco akatsaura £ £ 40m kubva kuManchester City, Kylian akanga asati atanga mutsara uye baba vainge vakajeka, sezvaakaudza L'Equipe kuti:
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Breaking Records
Akatangira kutanga kwaMonaco akwegura nemakore 16 nemazuva 347, achirova rekodi yakagadzwa naHenry, uyo aiva makore 17 nemazuva 14 apo akatanga kutambira boka racho kupfuura makore 20 akapfuura.
Kunyange, Henry vakati hazvina kunaka kutumidza Mbappe 'iyo itsva Thierry Henry'. But hakuna munhu akateerera nyevero yake ... kunze kweavo vanoda kushevedza kuti 'Neymar itsva'. Iye ndiye Youngest debitan kuMonaco. Mbappe akacherawo zvinyorwa muEurope maererano nemaminitsi nemigariro kana kubatsira-mberi kwekuti kunyange Lionel Messi.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Musangano weT Thierry Henry
Panguva ino, Thierry Henry haana kumboziva kuti akanga ari kutora mhondi nemukomana wemakore 5 uyo aizomupikisa kuburikidza nokuputsa mabhuku ake maviri.
Maererano naHenry, "Ndakasangana kamwechete paaiva mwana. Nhasi, iye mukomana akanaka ane musoro wakanaka pamafudzi ake. Anoremekedza zvikuru uye akanyarara. Akatsunga uye haamboregi. Iye ndiye kutaura kweguta uye ane tarenda yakawanda. Ane unyanzvi, zvinangwa, kubatsira. Anokwanisa kuita zvaanoda nebhora. "
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Musangano Christiano Ronaldo
Mifananidzo iri pasi apa inoratidza kuti Cristiano Ronaldo akabatana nepfudzi raKylian Mbappe pachigaro cheChristian reValdebebas. Pano aingova 13 chete. Mukana wake wokusangana naye C Ronaldo akauya mushure mokukoka Zinedine Zidane.
Mbappe, mumufananidzo, zviri pachena mukomana. Icho chithunzi kuti asimbise makore ake emakore. Ronaldo kune rimwe divi rinotarisa zvakafanana. Mbappe yakabva yatumbuka kuva mukomana akanaka kwazvo munguva shoma yakadaro.
Kuve mumufananidzo naRonaldo hapana mubvunzo kuti anofadza mwana akafanana neMbappe. Nhasi, akanga azviita nenzira yake munyika iye zvino uye zvichida akaonekwa sekutyisidzira kwaRonaldo. Nhasi, iye ari kutyisidzira kumamiriro ake uye Ballon d'Or yake.
Saizvozvowo, Paulo Dybala akarondedzera pachena pachena Lionel Messi se "chifananidzo" chake. Akakurira kubudisa mureza weBarcelona. Mumakwikwi e2016 / 2017 League, Dybala vakamusundira kunze kwechechi yeKnockout. Nguva yenguruve ne. Zvinosuruvarisa kufunga nezvazvo asi zuva richauya apo Lionel Messi naCristiano Ronaldo havasisiri kutamba. Vachave vaenda uye tichava nemangariro chete.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Zvinotaurwa nevamwe pamusoro pake
"Mbappé mutambi akanaka kwazvo. Iye zvino ari kuenzaniswa naT Thierry Henry uye iye anotamba saiye. Iye achiri muduku asi kana iye achienderera mberi achivandudza saizvozvi, iye achabata tende rwenyika zvechokwadi. " Bacary Sagna.
"Haasi iyeye chaiwo Thierry Henry asi ichokwadi kuti ane unhu hwakafanana uye ramangwana uye tarenda yakafanana. Izvo zvinogona kunge zvakafanana, mushure mezvo kana iye ane chiyero chakafanana chekukurudzira, chido uye njere iyo Thierry ane, uye makore maviri kana matatu anotevera achatiudza izvo, zvino anogona kuva akavimbisa kwazvo. " Arsène Wenger.
"Iye ava nemakore 18 uye zvaanoita zvinoshamisa. Kubvira pakutanga, takaona uye takaziva kuti akanga ari mutambi akasiyana, nenzira yake yekubata bhora somuenzaniso. Ane mutambo une chimwe chinhu chinokosha. Pamusoro pezvo, anoshanda zvakawanda. Ndinotarisira kuti acharamba achibatsira kutora mazita. " Bernardo Silva.
"Ane tarenda, hazvigoneki. Ane unhu chaihwo uye Tine bheti iye achava muRussia. " LifeBogger. "
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -The Bromance
Mutungamiri weMonaco haana kuberekwa apo Gianluigi Buffon, muchengeti weJuvenus, akatumidzwa muItaly squad nokuda kweChina Cup 1998 muFrance.
Uye nokuda kweMbappe, iyi ndeimwe yezviverengero zvakawanda zvaanogona kufungidzira pamusoro pokudada paanotora mhando yeMonaco kumhanyi kusvika kumakumbo mana ekupedzisira. Mukurumbira wake weChampions League zvinangwa mumutambo we2016 / 2017 zvinoreva kuti akawana nhamba yakafanana yezvinangwa mumutambo wacho pamberi pe19 saRaul.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -Kukwegura Nokukurumidza
Pamusoro pekucherechedza kwakanyatsocherechedza, mumwe angaona kukwegura kusati kwasvika pachiso chisingafanani nezera rake razvino.
Zvakare, makwinya akawanikwa mumaziso ake. Izvi zvinogumira mukukura kwake nekuchenjera.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -No Luxury
Senguva yekunyora, Kylian achiri kurarama mumusha wekudzidziswa kweMonaco. Chirongwa chake ndechokuisa pasi uye kugadzika kuitira kuti mukurumbira hauwane kusvika kumusoro wake. Apo mhuri yake iri pedo, anobva kumusha kuti agare naamai vake, baba nehanzvadzi
Kylian achiripo ane kamuri yake pachikoro chekudzidzisa. Iye aizodaro, kunyange zvakadaro, ane zvigadziro zvekugadzira chivakidzani chine pedo nedziva rekugezera. Asi handizvo zvaanoita. Akaona kuwedzerwa zvisina kufanira kwevamwe vatambi vechechi avo vakanga varasa nzira yavo. Kuti ndimudzivirire, ndakamutsigira kuti arambe ari mu (academy) centre. Zvisinei mune ramangwana riri pedyo, anotarisira kuwana nzvimbo yega. Anoti baba vake.
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts -LifeBogger Rankings
Robert Nyamavhuvhu 6, 2018 At 11:04 am
Kylian inoratidzika sejaya rakagadzikana kwazvo rine musoro wakanaka pamafudzi ake. Ndiri kufara kwazvo kuti baba vake vaifunga mberi kuti vatange kumudzidzisa pazera remakore matanhatu. Iye zvino basa rose rakaoma riri kubhadhara!
Detra Nyamavhuvhu 7, 2018 At 8:54 am
Zvakanaka kuverenga nyaya yakadai yehuduku. Pane zvakawanda zvokuziva pamusoro pevaya vanouya nevakuru vebhokisi. Zvaive zvakanaka kuverenga.
Isabel Nyamavhuvhu 7, 2018 At 9:11 am
Iko nguva dzose pane chimwe chinhu chekushanda nesimba kuti uite chero chaunoda. Mbappe imurume akanaka uye anoziva kuti ari kuenda kure.
Jonna Mayo Nyamavhuvhu 7, 2018 At 9:49 am
Vabereki vanoita basa guru mukuvimbisa kuti vana vavo vakazadzisa zviroto kana matarenda avo. Nguva dzose zvakanaka kuti titsigire vana vedu.
Lavonia K Nyamavhuvhu 7, 2018 Na 6:33 pm
Wow, zvose zvine chikonzero. Ndaifunga kuti kwaingova kungobva mumhepo iyo yaipemberera zvinangwa zvake nemaoko ake akayambuka. Icho chinopera apo pane chikonzero chiri shure kwayo.
Rod Silvers Nyamavhuvhu 7, 2018 Na 6:59 pm
Tinopfuura nepakawanda tisati tapedza. Hazvisi nyore kusvika kumusoro asi usina kuzvipira kwenguva yako. Zvinotorawo basa rakaoma uye chido.
murume Nyamavhuvhu 7, 2018 Na 7:12 pm
Zvaive zvakanaka pakuverenga zvakanakisisa biography yeMbappe. Ndangoona nyaya yacho uye ndisingatyi kuiverenga. Ndadzidza zvakawanda kubva kwaari.
Pablo Nyamavhuvhu 7, 2018 Na 7:36 pm
Kufanana nguva dzose, zvinokosha kuti uve nemoyo murefu pane zvaunoita. Zvinhu zvikuru zvinoitika kana iwe ukamirira. Hakusi kumhanya. Uyezve, sezvaakataura, zvakaoma zvakakosha. Kuva nesimba mune zvose zvaunoita.
Dominque Maiden Nyamavhuvhu 7, 2018 Na 7:50 pm
Pane zvinhu zvakawanda zvandakaverenga, izvo zvandisati ndambonzwa. Ndakafunga kuti yaiva nyaya pfupi chete, asi inosvika pane zvinhu zvakawanda zvakaitika muupenyu hwaMbappe.
Donte B. Nyamavhuvhu 8, 2018 At 3:59 am
Mbappe ine hupenyu hwemhuri hwakasiyana nekuenzaniswa nevamwe vatambi. Akaratidza kufanana nekugara kwake kumapurisa. Kunyange zvakadaro, akawana zvakawanda uye achiri kutarisira kuenda kure.
Brad Nyamavhuvhu 8, 2018 At 4:05 am
Mbappe ine zvakawanda munyaya yake. Ndakanga ndisingazivi kuti akanga asangana naCristiano achiri muduku. Akanaka uye isu tichiri kumirira kuti tione kushanda kubva kwaari kunouya nguva inotevera
Rose Nyamavhuvhu 8, 2018 At 4:21 am
Iyi ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekuverenga nhupenyu hwehupenyu huno hwehukuru uyewo huchauya hukuru hwebhokisi. Ndaiverenga imwezve nyaya uye yakanga iri inonakidza.
Serah Agbor Mbudzi 22, 2018 Na2: 16 pm
Thumbs kusvika kuvabereki! Mbappe Ndinoda yako playstyle, saka ine simba, iwe unomhanya sebhazikoro, ndiri kufanana! Apo ini ndakatanga kukuona iwe uchitamba, ndakaona Thierry Henry, ndakaona Ronaldinho, mutsara wangu wemifananidzo. Zvose zvakanakisisa mubhodhi rako.
ALICIA HUDSON Mbudzi 26, 2018 At 7:55 am
Lottin Mbappe ISI FENOMENON HAPANA CHEMAI. KUTENDA KWAVO VABEREKI VAKAWANDA. MBAPPE NDIYI WOKUtanga IDOLI uye ini NDINOGONA KUTI NDIMI ZVAKAWANDA, VOUS ETES MON MODELE. I am South Africa AFRICAN NDINOGONESA ISAYA, VAFRIKANSI, ZULU uye IM STILL KUDZIDZIRA Mataurirwo EFRENCH SI NDINOKUTI NDIDZIDZE IDOLI YANGU KUTI NDINOGADZIRA SEI
Tiwonge chauma Chivabvu 16, 2019 Na5: 15 am
kunyanya nyc kunyangwe ndakadzidza zvakawanda kubva kwaari.kukuitirai vose vakanakisisa apo iwe uchifambira mberi ne ur ur career
Edinson Cavani Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts